Kabsado Video & Photo ka Handycam, fiidiyo 3D
> Resource > Ladnaansho > Sony fiidiyo Recovery: Ladnaansho Khasaaray Videos & Sawirro
Ma suurogalbaa in kabsado videos ka fiidiyo Sony?
Waxaan si qalad ah la tirtiro videos qaar ka fiidiyo Sony Handycam HDR-CX56X. aan u isticmaalo in aan 2GB Sony xasuusta ul , oo waxaan ogahay in dhammaantiin faylasha la Handycam ah ay ku kaydsan yihiin waxa on. Waxaan isku dayay in ay qaataan usha bixi oo ku xidhmaan aan computer, laakiin videos tirtiray lama waxaa tusay. Ma jiraan wax fursadaha dib u soo ceshano videos fiidiyo ii?
Haa, waxaa suuro gal ah inuu ka soo kabsado tirtiray videos ka kaamirada Sony. Marka aad si toos ah u tirtiray videos ka fiidiyo, ma wax bin recycle sida kombiyuutarka ah in uu kaydiyo faylasha tirtiray jiro, iyo taas sababta aan iyaga waxaad ka arki kartaa marka aad u xirmaan your computer.
Laakiin videos tirtiray aan run ahaantii ka baxeen, laakiin waxa ay noqon aan la arki karin oo keliya oo la heli karo si la overwritten by files cusub. Sidaa darteed, waxaad u soo kaban karto, wax files ka kaamirada Sony sida Sony Handycam, fiidiyo 3D iyo in ka badan.
Sidee inuu ka soo kabsado files ka fiidiyo Sony (videos & sawiro)
Ka hor inta aanan waxba qaban oo kale, halkan ka heli barnaamij soo kabashada fiidiyo Sony: Wondershare Photo Recovery (la jaan qaada Windows 8/7 / Vista / XP), ama Wondershare Photo Recovery for Mac (la heli karo Mavericks).
Next, aynu isku dayi kabashada sawir for Windows ka wada si loo hubiyo tallaabooyin faahfaahsan.
Tallaabada 1. Isku aad fiidiyo Sony in kombiyuutarka
Si aad u soo kabsado tirtiray videos ka fiidiyo Sony dhab ahaantii waa in ay iyaga ka soo kabsado ul xasuusta isticmaali fiidiyo ah. Sidaa awgeed, waxaad dooran kartaa in si toos ah xiriiriyaan fiidiyo ugu computer la cable USB ah, ama kaliya xirmaan ul xasuusta la akhristaha kaarka. Qaado sida aad jeceshahay. Markaas abuurtaan barnaamijka iyo soo kabashada fiidiyo "Start" Sony.
Tallaabada 2. Scan files badiyay Sony fiidiyo / ul xasuusta
Halkan, aad fiidiyo ama xasuusta ul muuqan doonaa sida warqad drive ah. Waxaa Dooro oo guji "Scan" si ay u bilaabaan baadi files lumay ka qalab aad.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan Sony photos fiidiyo, videos
Scan ka dib, dhammaan faylasha recoverable, oo ay ku jiraan sawiro iyo videos, waxaa lagu soo bandhigi doonaa oo ku qoran qaybaha. Waxaad ku eegaan karo iyo hubi in ay iyaga oo dhan soo kabsadaan ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad fiidiyo Sony ama xasuusta ul isha. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial ee Sony kabashada fiidiyo sawir
Top 5 Free Lugood ee kaabta shawladda